Ciidanka AMISOM oo dhowr madaafiic ku duqeeyay duuleedka magaalada Marka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka AMISOM oo dhowr madaafiic ku duqeeyay duuleedka magaalada Marka
Ciidanka AMISOM ayaa maanta weerar madaafiic ah dhowr jiho ugu qaaday xaafado dhowr ah oo ku yaala duuleedka magaalada Marka ee xarunta gobolka Sh/hoose.
Madaafiicdaasi ayaa sida la sheegay laga soo tuuray xerada Ayuub ee magaalada Marka, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidanka AMISOM, waxaana ay madaafiicdaasi ku dhaceen xaafadaha kale duwan ee ku yaala duuleedka magaaladaas.
Ilaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay in ciidamada AMISOM ay madaafiic ku duqeeyaan xaafadaha ku yaala duuleedka Marka ee xarunta gobolka Sh/hoose.
Sidoo kale, lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay madaafiicdaasi, inkastoo qaar ka mid ah dadka deegaanka ay sheegayeen in qasaare uu jiro, balse aan la xaqiijin karin inta uu la egyahay.
Dhinaca kale, warar hoose oo ay heleyso warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaya in dhinaca lagu tuuray madaafiicdaasi ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan Xarakada Al-shabaab, inkastoo aan la xaqiijin karin in goobahaasi ay madaafiicdu ku dhacday iyo inkale.
Si kastaba ha ahaatee, Xarakada Al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore la wareegay gacan ku haynta magaalada Marka, inkastoo markii dambe lagala wareegay ayaa hadane la sheegayaa inay ku sugan yihiin duuleedka magaalada, halkaasi oo ay maanta ciidanka AMISOM madaafiicdu ku weerareen.